किन गर्छन्, सेलिब्रेटीहरुले आत्महत्या ? « Pahilo News
किन गर्छन्, सेलिब्रेटीहरुले आत्महत्या ?
प्रकाशित मिति : 15 January, 2017 2:57 pm
२ माघ । ‘नहोला सँगै आज तँ र म
साथी छाड्ने छैन भन्थ्यौ कहिले
तर साथी निकै एक्लो छु अहिले…।’
नयाँ पुस्ताबीच निकै चर्चित थिए, हिपहप गायक यम बुद्ध । र्याप गायकका रुपमा उनले बेग्लै चिनारी बनाएका थिए । टिन–एजर्सहरु उनका गीत सुन्न अत्यन्तै लालायित रहन्थे ।
तर, टिन–एजर्समाझ निकै चर्चित र्यापर यमले आफ्ना लाखौं ‘फ्यान’ हरुलाई निराश तुल्याए, आत्महत्या गरेर । शनिबार साँझसम्म उनले आत्महत्या गरेको खबर सबैतिर फैलिइसकेको थियो । उनी लण्डनमा श्रीमतीसँग बस्दै आइरहेका थिए र लण्डनस्थित आफू बसेको अपार्टमेन्टमा उनले आत्महत्या गरेका हुन् । ३० वर्षिय हिपहप गायक यमले आत्महत्या गरेपछि अमेरिकामा रहेका कवि कृसु क्षेत्रीले फेसबुकमा लेखे, ‘दुःखद् खबर गायक यम बुद्ध रहेनन् ।’
र्यापर यमले आत्महत्याको बाटो रोजेपछि एउटा प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ, आखिर कलाकारहरु किन आत्महत्याको बाटो रोज्छन् ? के कारण लुकेको हुनसक्छ, सेलिब्रेटीहरुले आत्महत्या गर्नुका पछाडि ?
प्रायजसो कलाकारहरुका जीवन तनावै तनावका बीच गुज्रिएको हुन्छ । त्यस्ता तनावका पछाडि पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत कारणहरु जोडिएर आउँछन् । तर, हामीकहाँ भने सेलिब्रेटीहरुले आत्महत्या गर्नुका पछाडि यौन, आर्थिक समस्या र सामाजिक उपेक्षाजस्ता कारणहरु रहेका छन् ।
केही वर्षअघि युवा–निर्देशक आलोक नेम्बाङले आफ्नै घरमा आत्महत्या गरे । अविवाहित रहेका नेम्बाङ सफल र नयाँ सोच बोकेका युवा निर्देशकका रुपमा चर्चित थिए ।
अमेरिकाबाट फिल्म निर्देशनसम्बन्धी उच्च अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएका नेम्बाङले म्युजिक भिडियोहरुमा नयाँ पन ल्याएका थिए । उनीद्वारा निर्देशित म्युजिक भिडियोहरुमा चलेका नायक–नायिकाहरुले पनि अभिनय गरेका थिए । उनले केही चर्चित फिल्म पनि निर्देशन गरे । तर, सफलताका सिँढीहरु उक्लिँदै गर्दा उनले आत्महत्याको बाटो रोजे ।
नायिका जेसिका खड्काको आत्महत्या–प्रकरण भने केही फरक थियो । इटहरीको एउटा सामान्य परिवारबाट संघर्ष गर्दै नेपाली फिल्म जगत्मा पाइला टेक्न पुगेकी खड्का यौन प्रकरणमा मुछिएपछि ‘बदनाम नायिका’ की रुपमा चिनिदै आएकी थिइन् ।
इटहरीमा छँदा ज्योति नामले चिनिने खड्काको एउटा अश्लील भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसको दोष गायक प्रकाश ओझामाथि लाग्न पुग्यो । ओझाले उनलाई ‘फिल्म खेलाइदिने’ सर्तमा शारीरिक सम्बन्ध राखेका थिए । त्यही प्रकरणमा ओझाले प्रहरी हिरासतमा समेत पुग्नु प¥यो ।
काठमाडौं आएर संघर्ष गर्दै गरेकी र केही फिल्ममा समेत अभिनय गरेकी जेसिका पछिल्लो समय भने मादक पदार्थको लतमा डुबेकी थिइन् । आफूले आत्महत्या गर्ने दिन उनले भाइलाई मादक पदार्थ किन्न पठाएर डेरामै झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
आत्महत्याकै बाटो रोज्ने अर्की गायिका हुन्, योगित मोक्तान । नेपाली आधुनिक गीत–संगीतमा प्रगति गरिरहेकी मोक्तानले तनावकै कारण केही वर्षअघि आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
कुनै समय चलेकी नायिका थिइन्, श्रीषा कार्की । पचासको दशकमा उनले थुप्रै नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेकी थिइन् । तर, उनले पनि तनावकै कारण आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
खासगरी, नेपाली कलाकारहरुले आत्महत्या गर्नुको पछाडि पारिवारिक दबाब, यौन उत्पीडन, आर्थिक चटारो र सामाजिक उपेक्षा नै प्रमुख कारण देखिँदै आएका छन् । शनिबार बेलुकी आत्महत्या गर्ने र्यापर यमले आत्महत्या गर्नुको पछाडि भने उनी केही समयदेखि मानसिक तनाव रहेको अनुमान गरिएको छ ।